Taorian’ny Fihetsiketsehana, Najanona Tampoka Ny Fikasan’ny Governemanta Makedoniana Hahazo Fampindramam-bola Vahiny Eurobond · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2016 5:29 GMT
Roa andro taorian'ny fihetsiketsehana goavana manohitra ny fampindramam-bola vahiny vaovao tao Skopje izay nokarakarain'ny Makedoniana, rava ny dingana famoahana Eurobond mampiadihevitra.
Niezaka mba hahazo renivola vaovao amin'ny famoahana Eurobond ny governemanta Makedoniana, karazana vola amidy amin'ny tsenan'ny banky Eoropeana. Araka ny filazan'ny praiminisitra, ilaina ny fampindramam-bola mitentina 650 tapitrisa euros (724 tapitrisa dolara) mba hiantohana ny fandoavana ny karama amin'ny fitantanam-panjakana marobe sy ny volan'ireo mpisotro ronono – vondrona mpifidy goavana izay mety ahafahan'ny antokon'ny fitondrana mijanona eo amin'ny fahefana amin'ny fifidianana manaraka.
Tamin'ny 14 Jolay, namoaka vaovao roa momba ny Eurobond Makedonia ny Reuters. Ny voalohany, nitatitra ny sampam-baovao fa nampidinina fito taona ny fotoana famerenam-bola raha 10 taona izany teo aloha. Niteraka hatezerana fanampiny izany, satria mahatonga ny toekarena tsy hanam-potoana hivoarana ahafahana mizaka ny fandaniana ny fanafohezana ny fotoana famerenam-bola .
Mitombo ihany koa ny olana satria efa akaiky ny fe-potoana farany amin'ny famerenana ireo fampindramam-bola hafa nataon'ny governemanta elatra havanana ankehitriny nandritra ny 10 taona nitondrana. Nanamarika ny ampahany fotsiny amin'ireo trosa ireo ny mpisera Twitter Parg0:
Nivoaka tamin'ny hariva teo ny vaovao faharoa momba ny Eurobond, nitatitra ny Reuters fa “nahemotra” ny famoahana vola Euro satria nampametram-panontaniana ny maha ara-dalàna azy. Naharay taratasy avy amin'ny antokon'ny mpanohitra SDSM, nosoratan’ny Minisitra lefitry ny vola teo aloha Kire Naumov, izay mitanisa hevitra ara-dalàna mikasika ny olana hoavy amin'ny famerenana ny trosa, ireo banky miandraikitra ny fivarotana ny vola, antsoina hoe mpitari-daharana (Citi Bank, Deutsche Bank, Erste Bank ary ny Société générale CIB).
Araka ny voarakitry ny fifanarahana, nanana fahefam-panakanana feno (veto) ny minisitra lefitra mpanohitra raha misy ny trosa vaovao, manery ny governemanta mba hifampiraharaha miaraka amin'ny mpanohitra izany. Saingy nosoloina mpikambana tao amin'ny antokon'ny fitondrana i Naumov tamin'ny volana Mey.
Namoaka fanambarana ny Minisiteran'ny Vola ho valin'ny taratasin'i Naumov, nilaza izy fa “madio” ny fifanarahana Eurobond fa ny mpanohitra no manimba ny firenena.
Tamin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra, tsy fantatra mazava na fanemorana fotsiny izany na fandresena vaovao ho an'ny mpanohitra ara-politika, sy ny hetsika ‘‘Revolisiona Maroloko” manohitra ny kolikoly sy ny tsy fahaiza-mitantan'ny governemanta ary ireo mpandray anjara voakasika hafa. Nilaza izy rehetra ireo fa miezaka hanakana an'i Makedonia tsy hilentika lalina ao anatin'ny trosa, tahaka ny zava-nitranga ao amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina, Gresy taona maro lasa izy ireo.
“Aoka izay ny trosa vaovao sy ny “fampiasam-bola” tsy misy dikany” hoy ny vakin'ny sary amin'ny pejy Facebook “Hopitaly, sekoly, akanin-jaza, orinasa fanadiovan-drano, fampidiran-drano. Tafiditra anaty trosa vaovao isika mba handoavana karama sy vola fisotroan-dronono, kanefa mampiasa vola 18 tapitrisa euros amin'ny Ferris Wheel? Tsy mila trosa fanampiny sy ‘fampiasam-bola’ tsy misy dikany intsony!”.